China China track roller maka KOMATSU dozer undercarriage emepụta na ndị na -eweta ya Jinjia
China track roller maka KOMATSU dozer ime ime
Onye na -egwu ihe na -eme ihe n'egwu ihe
Bulldozer akụkụ ime ime
Ihe nkedo kacha mma dozer rolle
Sprockets na ngalaba maka ndị na -egwupụta ihe na dozer na ...
komatsu track link assy emeputa na China
Akpụkpọ ụkwụ Sochie Maka Crawler Track
Otu flange, ihe nkedo flange okpukpu abụọ dabara adaba maka obere obere ihe mkpuchi 0.2-120 ton na ndị na-egwupụta ihe na bulldozers. Rollers ụdị pụrụ iche maka igwe igwe igwe, pavers, ọhịa na ngwa ọrụ ugbo.
Nhazi nke akara koodu abụọ na mmanye ogologo ndụ na -eme ka rolle ahụ bụrụ ndụ ahụike yana arụmọrụ dị egwu.
Ogo TRACK ROLLER
1. Akụkụ nke akwụkwọ mpịakọta na-esi ike ma ọ bụ nke siri ike, na-abawanye nguzogide na-egbochi ma hụ na nrụpụta dị elu na iguzogide nrụrụ. Akàrà ndị ahụ na -ekwe nkwa mmanye na -adịgide adịgide maka ịdịte aka kacha mma.
2. Akụkụ dị mma maka rollers gụnyere hubs, olu olu, bimetal bushings, shaft, na akara arụmọrụ dị elu.
3. Nrụpụta nke nhazi ibe ya dị ọkụ: rola shell nwere ezigbo nkesa na -asọba n'ime ihe owuwu nke eriri.
Inye ihe dị iche iche ma ọ bụ site na imenyụ ọkụ na -ekpo ọkụ, rollers nwere mmetụta na -eguzogide mgbawa ma nwee ogologo ndụ.
4. Uru Ọdịmma: Ihe nrịgo ala ： 50Mn/45#/40Mn2
Ọdịdị nke elu ： HRC53-56
Gbanyụọ omimi ：> 7mm
Ala aro ihe ： 45#
Mechie omimi ：> 2mm
Ihe olu akwa olu ： QT450
5. Ike mmepụta: 5000pcs/ọnwa. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka rola shell, na ụlọ nrụpụta igwe maka akwa olu, na -arụzi ihe ndị emechara, arụpụtara nke ọma na nke dị elu.
Ndụmọdụ maka nrụnye ihe egwu egwu egwu ọhụrụ
1. Ịgwakọta rollers ọhụrụ na nke ochie n'otu akụkụ nwere ike ibubiga ndị ọhụrụ ka ha na -anọdụ ala karịa ndị eyi, ya mere na -ebu oke ibu.
2. Ọ bụrụ na -edochi rollers ala ọhụrụ niile, a na -atụ aro ka ọ dabara ọkara niile ka mma n'otu akụkụ yana ndị ọhụrụ niile n'akụkụ nke ọzọ. Nke a na -eme ka nrụgide dị na rola ọ bụla na -ebuteghị nke ọ bụla.
3. Mgbe ị na -anọchi rolle ọhụrụ, agala ogologo ebe dị anya na -akwụsịghị igwe ahụ ugboro ugboro n'ihi na ha nwere ike ikpo oke ọkụ na ijide. Kwụsị nkeji 4-5 ọ bụla wee gaa n'akụkụ nke ọzọ ntakịrị iji nyere aka kesaa mmanụ. Nke a bụ akpachapụ anya maka elekere 100 mbụ
Nke gara aga: Akpụkpọ ụkwụ Sochie Maka Crawler Track
Osote: komatsu track link assy emeputa na China
Ihe nlele egwu egwu
Ndị na -agba egwu Track Flanged ugboro abụọ
Ihe nlele egwu egwu Excavator Track Roller
LS118 Omenala Track ala ala ebu 60T Fo ...
akụkụ ahụ mapụtara maka igwe nrụpụta undercar ...
Akụkụ Undercarriage nke Crawler Crane